Arimaha Qoyska: U GAAR AH QOOYSKA: Maxaa Sababay In 80 Sano Ay Lamaaniyaal Wada Noolaadaan , Halka Kuwa Kale Aan 8 Bilood Wada Joogikarin & Sirta Ka Dambeeysa Wada Noolaanshaha Waqtiga Fog Ee Lamaaniyaasha | Caalamka24.net
Arimaha Qoyska: U GAAR AH QOOYSKA: Maxaa Sababay In 80 Sano Ay Lamaaniyaal Wada Noolaadaan , Halka Kuwa Kale Aan 8 Bilood Wada Joogikarin & Sirta Ka Dambeeysa Wada Noolaanshaha Waqtiga Fog Ee Lamaaniyaasha
Dec 5, 2017 - jawaab
Lamaaniyaasha ayaa inta badan ku dhibaateeysan inay helaaan xiriir jaceyl oo waara maxaa yeelay mar walba waxaa dhacday in bilooyin, sanad ama sanadooyin ay kala tagaan kuwii aduunka isku jeclaa.
Mark Manson waa qoraa inta badan ku jiray wax badan arimaha xiriirka lamaaniyaasha waxaana uu soo jeedinayaa tallooyin lamaaniyaasha ka caawinaya inay wax badan isla joogaan ama ay wada noolaadaan.
Soomaalida waa lamaaniyasha inta badan sameeyaan xiriirka jaceyl balse waa wax yar lamaaniyaal badan oo inta badan wada noolaan muran la’aan , maxaase u sabab ah?
Mark Manson ‘’Waxaan qabaa haddii xiriirka jaceyl aad u abaarto inaan ka imaan cilad, xaqiiqda ayaa ah in labada lamaane laga doonayo inay wax badan kusoo kordhiyaan xiriirkooda, waxaad arkeysaa lamaaniyaal wada nool muddo ku siman 8 sano ,ama 60 sano maxay kaga duwan yihiin kuwa kale?
‘’Wax kale waxaa ay keliya wadaageen arinta ah in nolol gaar ah yeesheen wax badan , waxaa ay wada raaceen diyaaradda gaarka ah ee lamaaniyaasha ama caanshaqa,’’ ayuu sheegay Mark Manson.
‘’Waxa keliya ee dhibaatada u keena xiriirka jaceyl waa waqti wada qaadasho la’aanta, iyo labada lamaane oo kala shaki bilaabaan,’’ ayuu sidoo kale hadalkiisa ku daray.
‘’Waa wax wanaagsan in lamaaniyaasha isfahmaan , maxaa yeelay waxa keliya ee ay ku wada joogikaraan waa isfaham, waana waxa ugu muhiimsan ee looga baahan yahay lamaaniyaasha.
Dhamaan lamaaniyaasha waxaa macquul ah inaysan isku qanacsaneyn balse waxaa muhiim ah in xiriirkooda ay xoojiyaan.
Tallo Ku Wajahan Lamaaniyaasha Soomaaliyeed: Qof walba waxaa muhiim ah inuu ku kalsoonaado lamaantiisa , waxaa sidoo kale macquul ah in shaki uu imaado , balse isxakameeya.
Qalinkii fanax fariid
Shabakada Caalamka Online
Xafiiska Mogadishu Somalia